Indlu Elunxwemeni - I-Airbnb
Umkomaas, KwaZulu-Natal, eMzantsi Afrika
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguJulian
Ikwimizuzu nje eyi-40 ukusuka eMzantsi eThekwini, le ndlu intle ihleli phezu kweWincenham ibe ibonakala kakuhle kakhulu kwiSouth Coast. Indlu elunxwemeni ingalala abantu ukuya kutsho kwabayi-12 kumagumbi e-air con.
Le Ndlu iphucule i-Ceaserstone Kitchen.
Indawo yokuzonwabisa yangaphandle inkulu kunye nebhanka eyi-12 enemiqamelo kunye netafile yokutyela izihlalo eziyi-12.
NCEDA UQAPHELE ukuba amagumbi ayi-2 ahlukile kwisakhiwo esiyintloko, ukuba ngamagumbi ayi-2 okulala amakhulu. Nangona kunjalo bayinxalenye yoku kubhukisha!!
Indlu elunxwemeni inendawo yokuzonwabisa yangaphandle emangalisayo. Yenzelwe imitshato emincinci/ukudibana kwabantu okanye iimpela-veki kude nabahlobo. Igadi enkulu ivumela abantwana nezilwanyana zasekhaya ukuba bahambe baze badlale ngokukhululekileyo nangokukhuselekileyo.
Indawo enkulu yokuzonwabisa engaphantsi komhlaba ilungele iindibano zentsapho.
4.63 out of 5 stars from 18 reviews
4.63 · Izimvo eziyi-18
Indawo engummelwane ithe cwaka njengoko iNdlu ihleli kwindlela ye-cul de sac. Kukho ivenkile efumaneka iiyure eziyi-24 kuzo zonke ezo zinto zincinci ezifunekayo ebusuku okanye ekuseni. Unxweme luneendawo zokuhamba ezintle namachibi amatye kunye neBay encinci ethandekayo. Ukuhamba ngebhayisekile entabeni, ukuhamba ngebhayisekile kunye nokuhamba ngephenyane elwandle zonke ziyafumaneka ebumelwaneni nasekuhlaleni.
Ngoku ndihlala eUmbhlanga Rocks kumantla eThekwini ngoko andifane ndihlale ngaselunxwemeni xa iindwendwe zikhona.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Umkomaas